Masvingo: Guta Guru raMambo : Sekuru's Stories Masvingo: Guta Guru raMambo : Sekuru's Stories
Masvingo: Guta Guru raMambo
Saka vapinda muno umu, vakagara. Ndobva vasangana nevakauya neukuku. Saka vakauya neukuku ndobva vati, “Vakauya nekumvura apa Mahungwe.” Mahungwe kureva kuti hungwe. Mahungwe.
Saka zita iroro rakazosarira futi kuManyikaland. Tingati kubva kwaRusape zvichikwidza kunosvika kuInyanga, vanonzi Mahungwe. Saka vese ava vanonzi Mahungwe ava. Vakati ivavo vaitevedza mvura sehungwe, saka Mahungwe. Mahungwe.
Saka kuno uku, vakauya neukuku vaituma vanhu vechikadzi kuti, “Endai munotibvunzirawo vanhu avo kuti vakamira sei.” Vachida zvavanenge vachida, vaituma vakadzi.
Saka ivavo vakauya nepakati ndovaita sovakuru. Saka vaiti, vachibvunza kuti vachituma vakadzi, zvikanzi, “Sei imimi vakadzi muchitumwa? Varume venyu vari kupi?” Zvikanzi “Varume vasara. Saka vatituma isusu kuti tiuye kunobvunza.” Ndobva zvanzi Matonga. Vanotongwa nevakadzi. Vakauya neukuku vanonzi Matonga, vanotongwa nevakadzi.
Saka vagara muno umu, ndobva vazovaka masvingo aya. Vakavaka Masvingo vachiti ndoguta redu guru ratinozogara. Mambo anofanira kugara imomo achitonga mhosva dzake. Nemidzimu yedu, tinofanira kudii? Ndomatinenge tichinamatira midzimu yedu.
Saka ipapo pane shiri yahungwe, ndopayaigara ipapo. Kana paine zvimwe zvinhu zvinoitika zvakaipa, inorara ichichema usiku wese. Ikarara ichichema, ine zvairi kutaura. Saka vaiti injerere, inotaura zvichaitika.
Saka hungwe iyoyo, yakazoramba iri pamufananidzo yezvinhu zvese zveZimbabwe. Ishiri huru. Ichikosha zviya zviya, uchiiona pamureza zviya zviya, nemhaka yekuti ipapo yaigara pamusoro peMasvingo paye.
Saka vavaka ava, vaitiwo mambo wedu isu anofanira kugara takaungana tese tiri panzvimbo imwe chete. Havaiziva kuti vachazowanda. Saka kuwanda kwavakazoita manje varimo umomo, ndokwakaita kuti vaite dzimwe mhosva dzatinoti makunakuna. Saka ndobva Masvingo akoromoka.
Saka paakakoromoka Masvingo ndobva vati, “Ha, pano paipa.” Vamwe ndokuchitanga kuenda uko, vamwe vachienda uko, vachingopararira vachienda, nokuti vakati ivo “Hapachagarika, Masvingo akukoromoka. Saka pane mhosva yaparwa.”